Inona ny NFPA 704 na ny Diamond Diamond?
Science Abbreviations & Acronyms
Azonao angamba ny nahita ny NFPA 704 na ny diamondra mifono vy ao anaty vata-simika. Ny National Fire Protection Association (NFPA) any Etazonia dia mampiasa ny fenitra antsoina hoe NFPA 704 ho toy ny lozam- panafody simika . Ny NFPA 704 indraindray dia antsoina hoe "diamondra afo" satria ny mari-pamantarana diamondra dia manondro ny mety hitera-pahavoazana azy ary mampita ny fampahalalana ilaina momba ny fomba tokony hifehezan'ny ekipa mpamaky amin'ny fitaovana raha misy fipoahana, afo na loza hafa.
Understanding the Fire Diamond
Misy sombin-tsary efatra misy eo amin'ny diamondra. Ny fizarana tsirairay dia asiana marika amin'ny isa 0-4 mba hanondroana ny lanjan'ny loza. Amin'ity sehatra ity, ny 0 dia manondro "tsy misy loza" raha 4 dia midika hoe "loza mahatsiravina". Ny fizarana mena dia manondro ny hafanana . Ny fizarana manga dia manondro loza mety hitranga. Ny jiro dia manondro ny fihenan-tsakafo na ny fipoahana. Ny fotsy dia ampiasaina mba hamaritana ireo loza mety hitranga .
Fanampiana marika misimisy kokoa
Printable famantarana momba ny Safe Labs
Fikojakojana ny fandrakofana simika
Symbian hazavana ao amin'ny NFPA 704
Symbol sy Number Meaning ohatra
Blue - 0 Tsy manimba loza ara-pahasalamana. Tsy misy fepetra ilaina. rano
Blue - 1 Ny fipoahana dia mety miteraka fisalasalana sy faharatrana marefo. acétone
Blue - 2 Ny fipoahana mafy orina tsy maharitra dia mety miteraka tsy fahampiana na ratra. etyl ether
Blue - 3 Ny tarehin-tsoratra fohy dia mety miteraka fahavoazana maharitra na maharitra. gas chlorine
Blue - 4 Ny fiterahana fohy dia mety miteraka fahafatesana na faharatrana mivaingana. sarin , monoxide karbona
Red - 0 Tsy handoro. gazy karbonika
Red - 1 Tokony hasiana fanafody mba handrodana. Ny tselatra dia mihoatra ny 90 ° C na 200 ° F mineraly
Red - 2 Ny hafanana maoderina na hafanana ambony loatra dia ilaina amin'ny famaranana. Hafatra mitifitra eo amin'ny 38 ° C na 100 ° F ary 93 ° C na 200 ° F fuel diesel
Red - 3 Ny ranon-javatra na ny solidenes izay manjelaka mora foana amin'ny toetry ny mari-pana eo amin'ny toetrandro. Ny tavy dia manana teboka latsaky ny 23 ° C (73 ° F) ary teboka manify na 38 ° C (100 ° F) na teboka tselatra eo amin'ny 23 ° C (38 ° F) ary 38 ° C (100 ° F) lasantsy
Red - 4 Vetivety na tototry ny hafanana ara-dalàna sy ny faneriterena na manaparitaka mora foana eny amin'ny rivotra ary mora levona. Flash point below 23 ° C (73 ° F) hydrogen , propane
Yellow - 0 Azo itokisana matetika na dia voan'ny afo aza; tsy manakorontana amin'ny rano. hélium
Yellow - 1 Azo itokisana, saingy mety hanjary hafanana sy tsindry avo be. propene
Yellow - 2 Miova tsikelikely amin'ny hafanana sy ny tsindry avo izy, na maneho herisetra amin'ny rano na mamolavola solifara misy rano. sodium, phosphorus
Yellow - 3 Azoko atao ny manazava na mamoy ny fipoahana vokatry ny fisian'ny hetsika mahery vaika na mamaly amin'ny rano na mihorakoraka mafy. ammonium nitrate, trifluoride chlorine
Yellow - 4 Vetivety dia mamotipotika ny fipoahana na mihodina amin'ny hafanana sy ny tsindry mahazatra. TNT, nitroglycerine
White - OX oxidizer peroxyde hydrogen, nitrome ammonium
White - W Mifanaraka amin'ny rano amin'ny fomba mampidi-doza na mahazatra. sulfuric acid, sodium
White - SA gas asphyxiant tsotra Tsy misy afa-tsy: nitrogen, helium, neon, argon, krypton, xenon
Fanitsakitsahana ny cheminiana manomboka amin'ny taratasy L
Fanitsiana chimie manomboka amin'ny taratasy s
Fikirakira ny fiovaovan'ny toetrandro
Mianara momba ny STP amin'ny Chemistry
Fanabolam-pahaizana momba ny simia manomboka amin'ny taratasy N sy O
Fanitsakitsahana ny cheminiana manomboka amin'ny taratasy E
Fanitsakitsahana ny cheminiana manomboka amin'ny taratasy Letters U sy V
Fanabolam-pahaizana momba ny simia manomboka amin'ny taratasy C
Fanabolam-pahaizana momba ny simia Manomboka amin'ny W, X, Y, Z
Fanitsiana chimie manomboka amin'ny H ary izaho
Ahoana no nahatonga ny WEB Du Bois ho marika amin'ny sosiolojia
Fomba hahitana ny fampisehoana nataonao sy ny toetrany taloha ho an'ny Rallye Thoroughbred
Fomba iray hahazoana legalisation ho an'ireo mpifindra monina tsy ara-dalàna
Ny adiresy ao amin'ny Seton Hall University
Johannes Kepler - Astronomie
Fantaro ny fomba fikajiana tombony
4 Tombontsoa ho an'ny Sekoly tsy miankina
Ahoana ny fampiasana "Est-ce Que" mba hametraka fanontaniana amin'ny teny Frantsay
11 Fihetseham-po mahatsikaiky momba ny andro fianarana tsara Ol
Bodista sy Ratsy
Review: Iggy Azalea "Fancy" mampiseho an'i Charli XCX
Amin'ny alàlan'ny fametrahana ny karatra maitso amin'ny kodiarana ho an'ny kodiarana
Mampifandray ny Ranomasina Mena amin'ny Mediteraneana
Ny taonan'ny Super PAC amin'ny politika Amerikanina
Ny fandraisana anjaran'ny Oniversiten'i Saint Peter
Soso-kevitra hampiroboroboana efitrano fianarana samirery
Firy ny isan'ny atomôsina C ao anatin'ny 1 molin'ny sukrose?
16 'Zava-dehibe ny Star Wars' Manambara ny antony nahatonga an'i Anakin Skywalker nanambara ny fahamaizinana
Tetik'ady 8 hiatrehana ny fitsaratsaram-poana
Lisitry ny Album na Album Folk Music 2000s
Ny fomba hipetrahana ao anaty kayak
Ianaro ny fizarana frantsay ny fizarana
Inona no atao hoe pesta?
Manazava ny zava-niseho teo amin'ny Mirror Bloody
Fanjakana fahiny: Vanim-potoana fahagola fahiny tany Ejipta
Tetikasa ivelany sy anatiny
Mianara ny Vavaka Guardian Guardian